Ciidamada Dowladda oo qabtay tuutaha ciidananka militariga soomaaliya – STAR FM SOMALIA
Waxaa Duhurnimadii maanta la qabtay gaari waday tuutaha Ciidamada Dowladda Somaliya, oo sida la sheegay loo waday Ururka Al Shabaab oo dagaalkula jira Dowladda Somaliya.
Gaarigan, ayaa waxaa lagu qabtay Degmada Balcad Ee Gobolka Shabellaha Dhexe, xilli uu ka yimid Magaalada Muqdisho, inkastoo aan la shaacin deegaanka rasmiga ah ee uu ku wajahnaa.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Shabellaha Dhexe, C/kariin Aaloos, ayaa waxaa uu sheegay in Ciidanka Nabad Suggida ay gacanta ku dhigeen gaarigaasi, xilli uu shidaal kaga shubanaayay kaalin shidaal oo ku taala Degmadaasi Balcad.
Afhayeenka, ayaa tilmaamay in baaritaano ka dib gaarigaasi laga helay tuutaha Ciidamada Dowladda, waxaana loo waday buu yiri Al Shabaab, balse ay ka hortaggeen xoogaga ammaanka.
Sidoo kale waxaa uu iftiimiyay in gaarigaasi dib loogu celiyay Magaalada Muqdisho, si su’aalo loogu weydiiyo laba nin oo la socotay, oo uu ka mid yahay darawalkii gaariga.
Xoogaga Al Shabaab, ayaa inta badan soo xirta dareyska Ciidamada Dowladda, xilliyada ay weerarada gaarka ihi ka fulinayaan Magaalooyinka ay gacanta ku hayso Dowladda.